Abantu + Ubuhlakani Bokuzenzela + Ubunye = Isiphithiphithi?
Ukudala lokhu Kufakwa Kwezobuciko kuthonywe kakhulu ulwazi lwami uqobo lokuthuthuka okusheshayo kobuchwepheshe kanye nobudlelwano enabo nabantu.
Sonke siyazi ngabantu, abantu esibathandayo abafakiwe, abathembele kakhulu futhi ngokwabo kumadivayisi afana namakhompyutha, omakhalekhukhwini nezinhlelo zokudlala.
Uma amadivayisi ezoqala ekugcineni ukuthatha impilo eyodwa kuthiwa ingumlutha ofana nezidakamizwa, utshwala noma ukugembula ... ukusho okumbalwa.
Ukwenza umsebenzi wobuciko ukukhombisa lokhu kukhathazeka nokukhuthaza inqubo yokucabanga kubaluleke kakhulu kimi.
Ngaphambi kwe-COVID, ngibone izitolo zekhofi zigcwele abantu abahleli ematafuleni futhi bagxile kuwo wonke amandla abo nokunaka kwabo kuphela kumaselula abo njengoba bephikisana nokuxoxa bodwa. Ukuhamba emigwaqweni ngekhanda lakho kugxile kuphela kuzinhlelo zokusebenza zokuxhumana. Ukuletha ukunganakwa kokungabazeki phambi kwethu.
Impikiswano ende ngezizukulwane ezintsha ezikhona ngokubambisana nobuchwepheshe njengendlela yokubuyisela ukuzimela komuntu ngokwemvelo.
Ingabe lolu ikhathalogi echazayo yomuntu omusha?
Ukuncika, ukuphazamiseka nokuncika ku-Artificial Intelligence enamandla?
Isidakamizwa esisha somlutha womphakathi.
Kukhungathekiswe yizici ezivusa amadlingozi nokulutha iningi lethu elinakho ngemidlalo, ukusetshenziswa kwezokuxhumana eziku-inthanethi, ama-iPhones, izinhlelo zokusebenza njalonjalo.
Ukubuka okungenalutho ebusweni balezi zimenenja eziphindwayo kungaqondana nokwabantu abaningi abathandekayo emphakathini wanamuhla.
Ngokuqhubekayo ucindezela imingcele ngobuhlakani bokufakelwa. Intuthuko, kungokwemvelo yethu ukwenza njalo.
Ngazile, futhi ngazama ukusiza, abaningi abathintekile yilezi zinhlobo zokulutha, imvamisa ngokungazi kubo. Ngokwamukela le ndlela ethile yokuphila, ebonakala ingeyejwayelekile, kukhawulela amandla abantu.
Nginomuzwa wokuthi sesisondelene kakhulu nokusetshenziswa kwe-intanethi kangangokuthi asisakwazi ukugxila empilweni esizungezile. Imvelo, ukuthintana komuntu, ukuzivocavoca umzimba, ukudla, ukufunda, ukubhala, ubuciko, ukuba khona komunye nomunye, ukwandisa izingqondo zethu ngokuzindla ........
Ngabe i-Artificial Intelligence izothuthukela emandleni azothuthukisa ngokuzumayo ukukhula kwezobuchwepheshe kumyalo wayo?
Uma kunjalo, ingabe inqubo eyodwa engenamehlo ingaba yisimo esinembile sokungaboni umhlaba osizungezile?
I-flip side kohlamvu lwemali, ubuchwepheshe bungaba bukhulu .... bunendawo yayo futhi singakusebenzisa nakanjani ukusizuzisa ezimpilweni zethu zansuku zonke. Ngalolu hlobo lwamandla kuza umthwalo omkhulu wokuba nesiyalo sokuvimbela ukuminza kokusetshenziswa ngokweqile.
Kukhona ubuhle bangempela ekulondolozeni ubungani nokuxhumana namalungu omndeni, kalula, kuwo wonke umhlaba.
Imininingwane etholakala kalula iyinsiza enhle kakhulu, ngokungangabazeki.
Kulesi siqeshana, bengifuna ukukhombisa uketshezi ngohlobo oluthile lwemibala. Ama-mannequins ensimbi ngokusobala ayingxenye ye-Artificial Intelligence esebe yingxenye yethu sonke. Umbala obomvu onamandla, ophakathi nendawo, ulingisa amandla omuntu wothando oluqhubekayo, uthando nokuzwela.
Inhliziyo ephukile ebonwa esifubeni ukuthi ubuchwepheshe bungabhubhisa kanjani, ngaphandle kwemizwa.
Kuyinhloso yami ukuhlanganisa lezi zinto ndawonye, ngaphandle komthungo eMhlabeni wokudideka okuyinqaba nobudlelwano obakhekayo kubo
ijubane elinjalo elisheshayo.
Izinhloso zami zakuqala kwakungukuveza umdwebo walesi sihloko esinothando lokuzikhethela, noma kunjalo kumongo mina noma kunjalo kungcono ukuba nobukhulu bomuntu obuthandeka kalula endalweni enamacala amathathu.
Ngabe ukufana kwabantu nobuhlakani bokufakelwa kungadala izinxushunxushu ezinkulu? noma ubuhlobo obuhlangene nobuhle?
"I-Artificial Intelligence ingapela ukuphela kohlanga lwesintu" ~ Stephen Hawking